काठमाडौं, मंसिर २९–गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए ) को कार्य समितिले पूर्णता पाएको छ । एनआरएनए नयाँ कार्यसमितिले विभिन्न विभागहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड, २१ जना सदस्यहरु मनोनीत, ५१ जनाको मानार्थ परिषद् गठन गरेसँगै समितिले पूर्णता पाएको हो । शनिबार राति साइवर कन्फ्रेन्समार्फत बसेको बैठकले रिक्त पदहरुमा मनोनीत गर्दै नयाँ कार्यसमितिलाई पूर्णत दिएको हो ।
बैठकले संघको कार्यसमितिमा २१ जना नयाँ सदस्यहरु मनोनित गरेको प्रवक्ता डिवी क्षेत्रीले जानकारी दिए । मउनका अनुसार मनोनित हुने सदस्यहरुमा युरोप क्षेत्रबाट रामशरण सिम्खडा, भक्त गुरुङ्ग, अनुजा प्रधान, प्रेम पमु र गुणराज शर्मा रहेका छन् । त्यस्तै अमेरिका क्षेत्रबाट पासाङ्ग शेर्पा, पुरुषोत्तम बोहोरा, डा.हरि दाहाल, डा. विष्णुमाया परियार, यमुना भट्टराई र प्रमोद सिटौला मनोनित भएका छन् ।
त्यसैगरी अष्ट्रेलियाक्षेत्रबाट डा. बिनोद श्रेष्ठ, डा. बसुन्धरा भट्टराई र दुर्गा आचार्य चयन भएका छन् । मध्यपूर्वबाट नविन पौडेल, यास्मिन वेगम, अब्दुल बसिद परेका छन् । त्यस्तै एशिया क्षेत्रबाट नारायण प्रसाद सुवेदी, इन्दिरा सुजुकी, दासुराम पराजुली र शान्ति अधिकारी संघको केन्द्रीय सदस्यमा चयन भएको प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिए । बैठकले ५१ जनाको मानार्थ परिषद् गठन समेत गरेको छ ।
त्यसैगरि बैठकले विभिन्न विभागहरुको जिम्मेवारी समेत बाँडफाँड गरेको छ । एनआरएनए लगानी समितिको संयोजकमा अध्यक्ष कुमार पन्त, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को संयोजकमा निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्ट, वैदेशिक रोजगारी संयोजकमा, डा.बद्री केसी, भुपूगोखा समन्वयन समिति संयोजकमा चन्द्र गुरुङ्गलाई चयन गरिएको छ ।
त्यसैगरी पर्यटन तथा व्यापारमा अर्जुन श्रेष्ठ, पर्यटन प्रवद्र्धनमा सपिला राजभण्डारी, भाषा तथा साहित्य हिक्मत थापा, विदेशमा नेपाली सामान प्रवर्द्धन शिव बरुवाल, एनआरएन नलेज एकेडेमी मन केसी, एनआरएनए एकेडेमी डा.प्रमोद ढकाल, नेपाल विज्ञान फाउण्डेसन डा. राजु अधिकारी, बालबालिका शिक्षा भूषण घिमिरे, महिला तथा युवा रविना थापा, महिला, स्वास्थ्य रजनी प्रधान र स्पोटर्स एकेडेमी हिमाल गुरुङ्गलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै भोकेस्नल शिक्षामा राम थापा, मानविय साहयता तथा परोपकारमा सोनामा लामा, एक एनसीसी एक च्यारीटीमा रविना थापा, नेपाल लाईब्रेरी परियोजनामा नरेश कोइराला, रक्त संचारमा फडिन्द्र पन्त, स्वास्थ्यमा डा. संजिव सापकोटालाई संयोजकको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।
प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार बैठकले नागरिकता निरन्तरता कार्यदल संयोजकमा सोनाम लामा, समितिको प्रमुख सल्लाहकारमा राम प्रताप थापा, संस्थाको प्रशासन प्रमुखमा संघका महासचिव डा.हेमराज शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको छ । बैठकले स्मार्ट एनआरएनएमा गौरी जोशी, सदस्यता वितरणमा आरके शर्मा, प्रकाशनतर्फ डिबी क्षेत्रीलाई संयोजक तोकेको छ । त्यसैगरी बैठकले अनुसाशन समितिको संयोजकमा डा. अम्विका अधिकारी, सदस्यहरुमा इन्द्रा बन, डा. देवकाजी डंगोल, सूर्य गुरुङ्ग (युके), र कृष्ण पाण्डेलाई चयन गरेको छ ।
त्यस्तै विधान संसोधन समितिको संयोजकमा भवानी ओलीलाई संयोजक तोकिएको छ । सदस्यहरुमा विनोद भट्टराई, रविन बज्राचार्य, पुष्प थापा, ओम गुरुङ्गलाई तोकिएको छ । नियमावली निमार्ण समितिको संयोजकमा ध्रुव सुवेदी र संघको पोलिसी तथा प्रोसिडर समितिको संयोजकमा रामशरण सिम्खडा, संघको आर्थिक स्थायित्व समिति संयोजकमा महेश श्रेष्ठ, आर्थिक संकलन समितिको संयोजकमा लोक दाहाल र एनआरएनए फाउण्डेशनको संयोजकमा एकनाथ खतिवडालाई चयन गरिएको संघका प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिए ।